के हजुरलाई यी जापानी सोया ससको प्रकार थाह छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > के हजुरलाई यी जापानी सोया ससको प्रकार थाह छ ?
मानिसहरु प्राचिन युग देखिने खाने कुराहरु प्रिजर्ब गर्ने तरिकाको खोजिमा थिए। विभिन्न उपाए अपनाएर उनीहरुले यो थाह पाएकी नुनको प्रयोगले खानालाई थुप्रै दिन सम्म बिग्रिन दिदैन। नुनले खाना अझ स्वादिलो पनि बनायो। पछि मानिसहरुले नुनको प्रयोग विभिन्न तरिकाले गर्ने क्रममा सोय सस् बनाए। सोय सस् प्राचिन चीनबाट उत्पति भएको हो। यसलाई चिनियाहरु झान्ग्यु भन्दछन। सोया सस् सोयाबिन (भटमास) बाट बनाईन्छ।
A post shared by Sushiman (@sushimantogo) on Jun 5, 2019 at 8:50am PDT
भनिन्छ जापानमा सोया सस् चीनबाट आएको हो। बुद्द धर्मका मंकहरुले ७औ शताब्दिमा जापानमा सोया सस् प्रयोग गरे। जापानमा भने यसलाई श्योयु भनिन थालियो। जापानमा अहिले पाच प्रकारका सोया सस् छन्। आज हामी हजुरहरुलाई यी प्राचिन प्रकारका सोयाससको जानकारी गराउनेछौ।
A post shared by Kikkoman Soy Sauce (@kikkoman_europe) on Apr 15, 2019 at 3:33am PDT
गाढा जापानी सोया ससलाई कोइकुची भनिन्छ। यो कान्तो क्षेत्रबाट आएको हो। यसको रंग गाढा भए पनि स्वाद भने फिका नुनिलो हुन्छ । प्रायले प्रयोग गर्ने सोया सस् यहि कोइकुची हो। यो सस् धेरै जसो म्यारिनेट गर्न र बास्टिङ्ग बनाउन प्रयोग गारिन्छ। यो सोया सस् तेरियाकी सस् बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ।
२. उसुकुची (Thin Taste)
A post shared by Sunn_yama_jpn (@tujibou1517) on Oct 26, 2016 at 11:20pm PDT
उसुकुची अलि फिका रंगको हुन्छ। त्यसको कारण यो सोयाससमा आमाजाके प्रयोग गरिएकोले हो। आमजाके भनेको एक प्रकारको जापानी ड्रिंक हो। यो भातलाइ फ़र्मेण्ट गरेर बनाईन्छ। यो कान्साई क्षेत्रबाट उत्पति भएको हो। यो माथिको कोइकुची भन्दा अलि धेरै नुनिलो हुन्छ।
A post shared by AKO (@akofilipinofood) on Jan 4, 2019 at 7:22am PST
तामारी कोइकुची भन्दा पनि गाढा रंगको हुन्छ। यो धेरै सोयाबिन र कम पानि प्रयोग गरेर बनाइन्छ। यसको फ्लेभर माथि को सस् भन्दा बढी हुने गर्दछ। यसलाई ओरिजिनल सोयासस पनि भनिन्छ। यो जापानको चुबू क्षेत्रमा बन्दछ। तामारी बढी फ्लेभरको हुने भएकोले साशिमीमा प्रयोग गरिन्छ। यो नात्तो वा तेरियाकी मा पनि प्रयोग गरिन्छ।
A post shared by Kittylovesblythe (@eviechia3) on Jun 4, 2019 at 10:50pm PDT
शियो सोया सस् नाम जस्तै फिका रंगको हुन्छ। यसमा निकै कम सोयाबिनको प्रयोग गरिन्छ। सोयाविनको सट्टा यसमा यसमा गहुको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसको स्वाद अलि गुलियो हुदछ। यो फिका रंगको भएकोले खानामा प्रयोग गर्दा यसले खानाको रंग परिवर्तन गर्दैन। त्यहि भएर यो तामागो याकी बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
A post shared by MEW MEN / NYC (@mewmennyc) on Apr 23, 2017 at 9:37am PDT
साइशिकोमि सोया सस् दुई चोटी ब्रु गरिएको हुन्छ। यो सबै भन्दा उच्च स्तरको सोया सस् हो। यो कोइकुची सोया सस् लाई फेरी फेर्मेंट गरेर बनाईन्छ। त्यसैले यो सबै भन्दा गाढा रंगको हुन्छ। यो सोया सस् पनि साशिमीको लागि प्रयोग गरिन्छ किनकि यसमा सबै भन्दा बढी उमामी हुने गर्दछ।